Indlu encinci eBrown - I-Airbnb
Indlu encinci eBrown
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguKathleen
Konwabele ukuhlala kwakho eSlayton, MN kule ndlu ipholileyo ibekwe kumda wedolophu kwi-1/2 acre. Le ndlu inamagumbi amabini okulala, elinye linebhedi ye-queen size elinye libe nebhedi eyodwa kunye nebhedi enkulu. Igumbi lokuhlambela libandakanya inyathelo elikhulu kwishawa kunye neenwele / isikhululo sokwenza. Ikhitshi lixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo ukulungiselela ukutya. Indawo yokutyela, enomnyango wepatio, ikhokelela kumngangatho kunye nepatio kwaye inika iimbono ezintle zeyadi enkulu yangasemva. I-grill yegesi ifumaneka ngexesha lemozulu eshushu.
Igumbi lokuhlala line tv exhotyiswe ngeFirestick kunye neDVD player.
Impahla yokuhlamba kunye negumbi lokuhlambela eliyi-1/2 zibekwe ngezantsi. Umgangatho ongaphantsi awugqitywanga kwaye awufanelekanga kubantwana abancinci. Indlela yempepho kunye negaraji ivaliwe. Iindwendwe zinokupaka kwindawo yokuqhuba.
Amabala emidlalo, apho ikhoyo iMurray County Speedway, ziibhloko ezimbalwa kuphela kude. Imidyarho ngoLwesihlanu, kwaye ngamanye amaxesha ngoMgqibelo, ngexesha lonyaka ingaba nengxolo. Isiphelo seMyuziyam kaLoliwe ibekwe kumgama oziikhilomitha ezili-10 eCurrie. IShetek State Park imi kumgama oziikhilomitha ezili-13. I-Pipestone National Monument ibekwe kumgama oziikhilomitha ezingama-28 ePipestone. Amathuba amakhulu okuloba kunye nokuzingela ayafumaneka kwindawo ejikelezileyo.
Nceda undazise ngefowuni, umbhalo okanye i-imeyile ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo.